4th Myanmar Festival of Artists with Disabilities – Myanmar Photo News
The 4th Myanmar Festival of Artists with Disabilities will be joyfully held on 28th December 2019 from5: 00 pm to 11 : 00 pm at MCC Hall, Mindama Road, Yangon. Together with festival ambassador, Myanmar Famous Singer, Zaw Win Htut and other famous artists, artists with disabilities from Philippine and Singapore and many of Myanmar artists with disabilities will be entertained in festival. So, you all are cordially invited to festival to enjoy the talents and great art of persons with disabilities together with us!
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ အနုပညာပွဲတော်ကြီးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းဓမ္မလမ်း MCC ခန်းမကြီးမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတော်သံတမန် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မသန်စွမ်းအနုပညာရှင်များအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ မသန်စွမ်းအနုပညာရှင်များက ပါဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတူတူပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…